သတင်း - Rotary Airlock Valve ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘာအတွက် သုံးတာလဲ။
ဤနယ်ပယ်တွင် နှစ် 20 အတွေ့အကြုံ
Pneumatic Plug Diverter အဆို့ရှင်
အလိုအလျောက် သန့်စင်ခြင်း Self Cleaning Rotary Discharge Feeder Airlock Valve Star Feeder Air Lock Valve
ဂျုံမှုန့် ဆန်ကြိတ်ခွဲမှု စနစ်အတွက် Positive Conveying Rotary Airlock Valve မှတဆင့် စီးဆင်းမှုအား မှုတ်ထုတ်ခြင်း၊
ဂျုံမှုန့်နှင့် ကောက်နှံအမှုန်အမွှားများကို သယ်ဆောင်ခြင်းအတွက် အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သော ဖိအားများ rotary airlock valve လေလော့ခ်
Rotary Airlock Valve ကို လျင်မြန်စွာ ဖယ်ရှားရှင်းလင်းခြင်း။
Rotary Airlock Valve ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘာအတွက် သုံးတာလဲ။
1.Airlock rotary valve ဆိုတာဘာလဲ
Airlock rotary valves များသည် အစိုင်အခဲများကို အခြေအနေတစ်ခုမှ အခြားတစ်ခုသို့ လွှတ်ထားစဉ် ဧရိယာ2ခုကို မတူညီသောအခြေအနေများအောက်တွင် ခွဲထားရန် လိုအပ်သောအခါတွင်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် အစိုင်အခဲများကို ကိုင်တွယ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကြားခံများတွင် အသုံးပြုပါသည်။
Rotary valves များကို အများအားဖြင့် star valves များဟုလည်းခေါ်ကြပြီး pneumatic သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများ၏ အစနှင့်အဆုံးတွင် အသုံးပြုကြသည်။ ၎င်းတို့သည် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းတစ်ခုမှ အစိုင်အခဲများကို မျဉ်း၏အစရှိ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းတစ်ခုသို့ မျဉ်းအဆုံးရှိ လေစီးဆင်းမှုမှ အစိုင်အခဲများကို ဖယ်ထုတ်ရန် ကူညီပေးနေချိန်တွင် ၎င်းတို့သည် အစိုင်အခဲအား လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းတစ်ခုမှ မျဉ်း၏အဆုံးသို့ ပို့ဆောင်ရန် ခွင့်ပြုသည်။
ထိုသို့သောအဆို့ရှင်များသည် ကြမ်းတမ်းသောဆေးများကို လုပ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့အား ဆေးထိုးကိရိယာအဖြစ် ကောင်းစွာတပ်ဆင်နိုင်သည်။
Airlock rotary valves အမျိုးအစား2မျိုးရရှိနိုင်ပါသည်- drop through type နှင့် blow through type. အမျိုးအစားနှစ်မျိုးစလုံးသည် အခြေခံအားဖြင့် တူညီသောရလဒ်များကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့ပြုလုပ်ပုံနှင့် ၎င်းတို့၏ထူးခြားချက်များမှာ အနည်းငယ်ကွဲပြားပါသည်။
Airlock feeders များကို အောက်ဖော်ပြပါ နယ်ပယ်များတွင် အသုံးချမှုများဖြင့် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည် ။
- အစားအစာလုပ်ငန်း (မုန့်ဖုတ်၊ နို့ထွက်ပစ္စည်း၊ ကော်ဖီ၊ အစေ့အဆန်များ)
- ဆောက်လုပ်ရေး (ဘိလပ်မြေ၊ ကတ္တရာ)၊
- Energy (ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ)၊
- ဓာတုပစ္စည်းများ / ရေနံဓာတုပစ္စည်းများ / ပိုလီမာများ
Rotary feeders ၏ အလုပ်လုပ်ပုံ အခြေခံမူများနှင့် အဓိက သတ်မှတ်ချက်များကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
2. rotary valve နှင့် Blow Through rotary valve ကိုဖြတ်ပါ။
airlock rotary valve မှတဆင့် ချပေးပါ။
airlock rotary valves များမှတဆင့် ထုတ်ကုန်ကို အောက်ပိုက် သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းများသို့ " drop" လုပ်နေသည်။ အဝင်အနားကွပ်တစ်ခုနှင့် ပလပ်ပေါက်တစ်ခုရှိသည်။
airlock rotary valve မှတဆင့်မှုတ်ပါ။
ကြယ်ပွင့်အဆို့ရှင်များမှတဆင့် မှုတ်ထုတ်ခြင်းလိုင်းနှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်သည်။ ထို့ကြောင့် conveying line တွင်အသုံးပြုသောလေသည် valves ၏ alveoles များမှတဆင့် တိုက်ရိုက်သွားကာ ထုတ်ကုန်ကို လွင့်စင်သွားစေသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်၊ အလွန်ကန့်သတ်အမြင့်ရှိသည့်အခါ သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်သည် ရဟတ်အတွင်းတွင် ကပ်နေနိုင်သည့်အခါမျိုးတွင် အဆို့ရှင်များမှတဆင့်မှုတ်ထုတ်ခြင်းကို အသုံးပြုပါသည်။ အခြားအပလီကေးရှင်းများအတွက်၊ drop through model သည် အလွန်နှစ်သက်သည်။
ပိုက်စီးဆင်းမှုတွင် rotor တိုက်ရိုက်ရှိနေခြင်းသည် ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူရာတွင် ပိုမိုကြီးမားသော ကွဲအက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်၊ အထူးသဖြင့် valves အများအပြား drop မှတဆင့် piping တစ်ခုတွင် ဆက်တိုက်ဖြစ်နေပါက အထူးသဖြင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဤကိစ္စရပ်အတွက်၊ ထုတ်ကုန်ကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် drop-through valves များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။
3. Star Valve Clearance နှင့် Contact detection
Star valves များသည် များသောအားဖြင့် rotor blades နှင့် stator အကြားတွင် အလွန်သေးငယ်သော ကင်းရှင်းမှုရှိပြီး၊ ၎င်းသည် တူညီသောဖိအားမဟုတ်သော အထက်နှင့် အောက်ပိုင်းနေရာများကြားတွင် လေဝင်လေထွက်ကောင်းစေရန်အတွက် လိုအပ်ပါသည်။
airlock rotary valves များအတွက် ပုံမှန်ရှင်းလင်းချက်မှာ 0.1 mm ဖြစ်ပြီး များသောအားဖြင့် valve အတွက် မျှော်လင့်ထားသည့် service ပေါ်မူတည်၍ 0.05mm မှ 0.25 mm အထိ ရှိပါသည် (အဆို့ရှင်၏ ဘေးတစ်ဖက်စီမှ ဖိအားများ ကွာခြားမှု မြင့်မားသည် သို့မဟုတ် မပါ)။ ၎င်းသည် rotary valves များသည် contact rotor/stator ကြောင့် မကြာခဏ ခြစ်ရာများ ခံစားရကြောင်း ရှင်းပြသည့် အလွန်သေးငယ်သော ရှင်းလင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အောက်ပါဇယားသည် အဆက်အသွယ်များ၏ ဘုံအကြောင်းရင်းများကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်။
တပ်ဆင်မှုတစ်ခုတွင် ဖုန်မှုန့်များ ပြန့်ပွားမှုကို ကာကွယ်ရန် rotary airlock ကို သီးခြားဒြပ်စင်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ယင်းအတွက်၊ airlock rotary valve သည် ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး မီးတောက်ခံနိုင်စေရန် အသိအမှတ်ပြုရပါမည်။
- ကိုယ်ထည်နှင့် ရဟတ်သည် ပေါက်ကွဲခြင်း၏ဖိအားကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည် - ပုံမှန်အားဖြင့် 10 bar g
- ဓါးသွား/အိမ်၏ ရှင်းလင်းရေးအစွန်းသည် 0.2 မီလီမီတာထက်နည်းရမည်။
- အဆို့ရှင်၏တစ်ဖက်စီတွင် အနည်းဆုံး ဓါး ၂ ချောင်းသည် အိမ်နှင့် ထိတွေ့မှုရှိရမည် (ဆိုလိုသည်မှာ စုစုပေါင်း blades အရေအတွက် > သို့မဟုတ် 8 နှင့် ညီမျှရမည်၊
5. Rotary Valve Degassing
နိမ့်သောရှင်းလင်းချက်သည် ကောင်းမွန်သောတံဆိပ်ခတ်ခြင်းကိုခွင့်ပြုပြီး rotary airlock valve ယိုစိမ့်မှုကို လျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ယိုစိမ့်မှု လျော့နည်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အိတ်ကပ်တစ်ခုစီရှိ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းသို့ အိတ်ကပ်ကိုဖွင့်လိုက်သောအခါတွင်လည်း အိတ်ကပ်တစ်ခုစီတွင် ပိတ်မိနေသောလေကို ထုတ်လွှတ်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါက လေယိုစိမ့်မှုကို ဖြစ်စေတယ်။
ဖိအားကွာခြားမှုနှင့်အတူ လေယိုစိမ့်မှုသည် တိုးလာကာ valve ၏ လည်ပတ်မှုအရှိန်နှင့်အတူ တိုးလာသည်။ ထွက်လာသောလေသည် အမှုန့်ကို အမှန်တကယ် အရည်ပျော်စေပြီး အိတ်ကပ်ထဲသို့ မဖြည့်နိုင်အောင် ကာကွယ်ပေးသောကြောင့်၊ အထူးသဖြင့် အပေါ့စားအမှုန့်များဖြင့် အဆို့ရှင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို အလွန်ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
ဤဖြစ်စဉ်ကို airlock rotary blades များ၏စွမ်းဆောင်ရည်အကွေ့အကောက်များတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်- စွမ်းရည်သည် assymptot တစ်ခုသို့ရောက်ရှိပြီး အိတ်များကို ထုတ်ကုန်မှ ထပ်မံဖြည့်၍မရတော့သောကြောင့် အရှိန်အဟုန်မြင့်စွာဖြင့် ကျဆင်းသွားကာ အိတ်များတွင် အရည်အလွန်အကျွံကျရန် အချိန်လိုအပ်ပါသည်။
ဤဖြစ်စဉ်ကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်အဆို့ရှင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်၊ rotary valve ၏မှန်ကန်သောလေထွက်ခြင်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်အသစ်မကောက်ယူမီ လေထုထဲမှ လွတ်သွားစေရန်အတွက် အိတ်ကပ်များမှ ပြန်တက်လာသည့် ဘက်တွင် degassing channel တစ်ခုကို တပ်ဆင်ထားသည်။ ချန်နယ်သည် လေကို ထုတ်လွှတ်ရန် ဇကာတစ်ခုသို့ ပို့နေသည်။
6. Airlock rotary valve ဒီဇိုင်း တွက်ချက်မှုများ (အရွယ်အစား)
ပေးထားသောဖြတ်သန်းမှုတစ်ခုအောင်မြင်ရန် star valve ၏စွမ်းရည်တွက်ချက်မှုသည် star valve အချင်း၊ ၎င်း၏ပစ်မှတ်လည်ပတ်နှုန်းနှင့် ထုတ်ကုန်၏သဘောသဘာဝ၊
- ပိုမိုမြင့်မားသောလည်ပတ်နှုန်းသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ဖြတ်အားပိုမိုအားဆိုလိုသော်လည်း ဖြတ်သန်းစီးဆင်းမှုသည် သတ်မှတ်ထားသောအမြန်နှုန်းကိုကျော်လွန်၍ တိုးလာမှုရပ်တန့်သွားမည်ဖြစ်သည်။
- အမှုန့်သည် အရည်များလေလေ၊ ဖြတ်သန်းမှု မြင့်မားလေလေ၊ ပေါ့ပါးလွန်းသော ထုတ်ကုန်များသည် လည်ပတ်မှုအမြန်နှုန်းတွင် ကန့်သတ်ချက်တစ်ခု ဖန်တီးပေးမည်မှာ ပေးသွင်းသူ၏ ဘေ့စ်မှ ခန့်မှန်းနိုင်သော်လည်း ကုန်ပစ္စည်း၏ အသိပညာသည် သော့ချက်ထည့်သွင်းမည်ဖြစ်သည်။ .
7. airlock rotary valves များတွင် အဖြစ်များသော ပြဿနာများ
မတူညီသောပြဿနာများသည် ၎င်း၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်စဉ်အတွင်း star valve ကို အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ အဖြစ်များသော ပြဿနာများမှာ အောက်ပါတို့ ဖြစ်သည် ။
- ဒီဇိုင်းအောက်ပါ စွမ်းဆောင်ရည် (မျှော်မှန်းထားသည်ထက် နိမ့်ကျသည်)
- သတ္တု/သတ္တု ထိတွေ့မှုကြောင့် ပျက်စီးခြင်း။
8. Airlock rotary valve ၀ယ်ခြင်းလမ်းညွှန် - airlock rotary valve ကိုရွေးချယ်နည်း
Airlock rotary valve ရောင်းရန်- airlock rotary valve အသစ်ကို ဝယ်ယူခြင်း။
သင့်စက်ရုံအတွက် airlock rotary valve အသစ်ကို ဝယ်ယူသည့်အခါ မှန်ကန်သောသတ်မှတ်ချက်များကို ဝယ်ယူရန်အတွက် အောက်ပါမေးခွန်းများကို မေးမြန်းရန် လိုအပ်သည်-
● လော့ခ်ချသည့် ရိုတာရီ အဆို့ရှင် ဒီဇိုင်းသည် လော့ခ်ချခြင်း သို့မဟုတ် ဖြတ်သွားခြင်းကဲ့သို့ ပိုကောင်းပါသလား။
● သင့်တွင် အထူးပစ္စည်းတစ်ခု လိုအပ်ပါသလား (ဥပမာ စတီးလ်စတီးလ်) သို့မဟုတ် စံသတ်မှတ်မှု လုံလောက်ပါသလား။
● သင်လိုအပ်သော ဖောက်အားက ဘာလဲ နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပစ္စည်း၏ အမြောက်အများ သိပ်သည်းဆက ဘာလဲ၊ ၎င်းသည် valve ၏ အချင်းကို ပေးလိမ့်မည်
●အဆို့ရှင်သည် အပူသို့ ရောက်သွားပါသလား။ တိကျသော rotor stator clearance ရှိရန် လိုအပ်ပါသလား။
●အဆို့ရှင်သည် ဖိအား pneumatic conveying line သို့ အစာကျွေးနေပါသလား။ ၎င်းသည် degassing လိုအပ်ပါသလား။
● အဆို့ရှင်အတွင်း မကြာခဏ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသလား။
● အမှုန့်များ စီးဆင်းမှု ကင်းစင်ခြင်း သို့မဟုတ် သီးခြား ဓါးများနှင့် အိတ်ဆောင် ဒီဇိုင်း လိုအပ်ပါသလား။
● ဖုန်မှုန့်ပေါက်ကွဲမှုဧရိယာတွင် လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် airlock rotary valve ကို အသိအမှတ်ပြုရန် လိုအပ်ပါသလား။ ဟုတ်ပါက အဆို့ရှင်အတွင်းနှင့် အနီးတစ်ဝိုက်တွင် မည်သည့်ဇုန်အမျိုးအစား ခွဲခြားမှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်နည်း။
●အဆို့ရှင်သည် ပေါက်ကွဲခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်သလား (ပုံမှန်အားဖြင့် 10 bar)
အကယ်၍ သင့်တွင် pneumatic conveying လိုင်းများရှိ rotary airlock valves နှင့် diverter valves များ လိုအပ်ချက်ရှိပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံ အခမဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အမှတ် 68၊ အုပ်စု 5၊ Dayan ကျေးရွာ၊ Linjiang မြို့၊ Yanjiang ခရိုင်၊ Ziyang ကောင်တီ၊ Sichuan ပြည်နယ်၊ China။
rotary feeder,3Way Ball Valve, Electronic Control Valve, rotary valve, 3-Way Diverter Valve, လော့ခ် အဆို့ရှင်,